Q3 2077/78(Q3 2077/78) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
जोशी हाइड्रोपावर घाटामा, विद्युत बिक्रीको आम्दानी भने बढ्यो
काठमाण्डौ । विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढे पनि जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासमा घाटा व्यहोरेको छ। अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३५ लाख ७१ हजार घाटा व्यहोरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले...
विजय लघुवित्तको नाफामा १०३.७२%को उछाल, रिजर्भमा ६२.५९%को छलाङ
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नाफा सतप्रतिशत बढीले बढाउन सफल भएको छ। आज सार्वजनिक चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०३.७२ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष संस्थाले ५ करोड ८१...
काठमाण्डौ । अरुण काबेली पावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको समीक्षा अवधिको नाफा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६८.३८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको...
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी : बीमाशुल्क आर्जन १९.९३%ले बढ्यो, नाफा कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमाससम्म खुद बीमाशुल्क ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले निर्जीवन व्यवसायबाट ५ अर्ब २२ करोड र जीवन व्यवसायबाट ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो। जुन गत वर्षको सोही...
नेपाल हाइड्रो डेभलपरको नाफा ६५%ले घट्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडको नाफा घटेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा ६५.०३ प्रतिशतले घटेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा ३ करोड २२ लाख नाफा आर्जन गरेकोमा समीक्षा अवधिमा घटेर १ करोड १२ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ। यो अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा पनि घटेर...
विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढ्दा पनि हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको नाफा ८८.८४%ले घट्यो
काठमाण्डौ । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ११ लाख ३३ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ। कम्पनीको आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८८.८४ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको...
हिमालय ऊर्जाको नाफा ७८.५४%ले घट्यो, रिजर्भ रु. ७५.५५ लाखले ऋणात्मक
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको नाफा घटेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा ७८.५४ प्रतिशतले घटेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा ४२ लाख ४६ हजार खुद नाफा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा घटेर ९ लाख ११ हजार रुपैयाँमा सीमित बनेको हो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको अन्य...
रसुवागढी हाइड्रोपावर घाटामा, ईपीएस पनि ऋणात्मक
काठमाण्डौ । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पनि घाटामा गएको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको हो। गत वर्षको यही अवधिमा पनि कम्पनीले ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको थियो। यो अवधिमा कम्पनीलाई २ करोड ७...
सिनर्जी पावरको नाफा घट्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको समीक्षा अवधिको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १३.५४ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। समीक्षा अवधिमा...
काठमाण्डौ। नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार सीआईटीको समीक्षा अवधिको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ५६.०३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म सीआईटीले ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा...
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर : विद्युत् बिक्रीको आम्दानी घट्दा नाफामा संकुचन
काठमाण्डौ । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा १२.१० प्रतिशतले घटेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ करोड २७ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको...
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक, बीमा शुल्क १५.०८%ले बढ्दा नाफा कति ?
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १५.०८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ३३ करोड ८१ लाख...
विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढ्दा माउन्टेन हाइड्रो नाफामा, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १० करोड १० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। समीक्षा अवधिमा...
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको नाफा ३०.६०%ले बढ्यो, रिजर्भमा पनि बढोत्तरी
काठमाण्डौ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा गरेको नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३०.६० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ घाटा...